Nofaranan'i Rosia ny famerana ny sidina mankany amin'ny toeram-pialan-tsasatry ny Ranomasina Mena any Egypt
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Egypt » Nofaranan'i Rosia ny famerana ny sidina mankany amin'ny toeram-pialan-tsasatry ny Ranomasina Mena
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Egypt • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Nofaranan'i Rosia ny famerana ny sidina mankany amin'ny toeram-pialan-tsasatry ny Ranomasina Mena
Nijanona ny fifamoivoizana an-habakabaka teo anelanelan'ny Russia sy Egypt tamin'ny volana novambra 2015 taorian'ny nianjeran'ny fiaramanidina mpandeha Rosiana iray ny saikinosy Sinay ka nahafatesana olona 224.
Namoaka didim-pitsarana mandrara ny sidina ataon'ireo mpitatitra fiaramanidina rosiana mankamin'ny toeram-pialantsasatr'i Egypte tamin'ny 2015.
Ao amin'ny kinova farany navoakany, ny sidina mahazatra mankany Kairo sy sidina ofisialy mankany Egypt ihany no navoakan'ity didim-panjakana ity.
Tamin'ny 23 aprily 2021, nifanaraka ny filoha rosiana sy ejyptiana fa hanohy ny sidina misy eo anelanelan'ny tanàna rosiana sy ny toeram-pialofana ao amin'ny Ranomasina Mena any Egypt.
Didy 6 taona mandràra ny serivisy an'habakabaka ataon'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka rosiana mankany amin'ny toeran-tsofina any amin'ny Ranomasina Mena egyptiana no nofoanana tamin'ny alakamisy teo ny filoha rosiana Vladimir Putin.
Ao amin'ny kinova farany navoakan'i Putin ankehitriny, io sidina io dia tsy namela afa-tsy sidina mahazatra mankany Kairo sy sidina ofisialy mankany Egypt. Izy io koa dia mirakitra tolo-kevitra amin'ireo mpandraharaha mpizahatany sy mpiasan'ny fizahan-tany mba tsy hivarotra vokatra fizahan-tany ho an'ny sidina mankany Egypt, afa-tsy ny any Kairo. Nofoanana sy foana ireo fameperana ireo.
Nijanona ny fifamoivoizana an-habakabaka teo anelanelan'ny Russia sy Egypt tamin'ny volana novambra 2015 taorian'ny nianjeran'ny fiaramanidina mpandeha Rosiana iray ny saikinosy Sinay ka nahafatesana olona 224. Ny sampan-draharaha misahana ny filaminana federaly rosiana (FSB) dia nahafeno fepetra ho hetsika fampihorohoroana.
Tamin'ny volana Janoary 2018, nanao sonia ny didim-panjakana mamela ny hanohy ny sidina mpandeha efa ho any Kairo i Putin, saingy voafetra ihany ny sidina mankany amin'ny toeram-pialantsasatra ejipsiana.
Tamin'ny 23 aprily 2021, ny filoha rosiana Vladimir Putin sy ny filoha egyptiana Abdel Fattah el-Sisi avy any Egypt dia nanaiky ny hanohy ny sidina misy eo anelanelan'ny tanàna rosiana sy ny toeram-pialan-tsain'ny Ranomasina Mena ao Egypt.